China High Quality3Battery Holder Micro Usb ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
3 ဘက်ထရီ Holder ကို Micro Usb
3 Battery Holder Micro Usb Holder သည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျနှင့်ကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ PC pin ပါသောဤ3AAA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် 4.5V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
ဘက်ထရီ ၃ လုံးပါ Micro Usb ၁ လုံး၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
ဤ3ဘက်ထရီ Holder Micro Usb ကိုင်ဆောင်သူသည် AAA သာမန်ဓာတ်ခဲသုံးလုံးသို့မဟုတ်အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီသုံးလုံးကိုကိုင်နိုင်သည်။ ဤဘက်ထရီများသည် MP3 player, MP4 player, remote control, portable flashlight, wireless mouse, စသည်တို့အတွက်သုံးနိုင်သော 4.5V ဗို့အားကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ 100% ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်သင့်အတွက်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
3 Battery Holder Micro Usb ၏ ၂. ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် PC pin နှင့် AAA ဓာတ်ခဲ ၃ လုံးထည့်ပါ
အရွယ်အစား: ၅၃*၃၇.၅*၁၂.၄ မီလီမီတာ
၃။ Battery Holder Micro Usb ၏ ၃။ ထုတ်ကုန်၏ထူးခြားချက်နှင့်အသုံးချမှု
၁။ ဤ ၃ ခုပါသော Holder Micro Usb Holder ကို ၄.၅v ဘက်ထရီမှထုတ်ပေးနိုင်သည်
၄။ AAA ဓာတ်ခဲသုံးလုံးကိုကိုင်ထားပါ။
၇။ MP3 player, MP4 player, remote control, portable flashlight, wireless mouse စသည်တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်
၃။ Battery Holder Micro Usb ၏ 4. Product Details
3 ဘက်ထရီ Holder Micro Usb ကိုင်ဆောင်သူအသေးစိတ်
ပစ္စည်း: PP အစေး + တေးဂီတဝါယာကြိုးနီကယ်ချထားသောနွေ ဦး
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: PC pin နှင့်3AAA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ
အရွယ်အစား: 53*37.5*12.4mmï¼ŒPC pin အရှည် = 14.7mm
၅။ Battery Holder Micro Usb ၃ လုံး၏ Product Qualification
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်ပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့၏3Battery Holder Micro Usb အားလုံး။
၆။ Battery Holder Micro Usb ၃ လုံးကိုထုပ်ပိုး။ ပို့ဆောင်ခြင်း
၃။ Battery Holder Micro Usb ၏ ၇။ အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်3Battery Holder Micro Usb Holder ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုများနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများ၊ သင် ၃ ဘတ်ထရီ၊ Micro Usb ကိုင်ဆောင်သူအတွက်အခမဲ့နမူနာများရနိုင်သည်။ ကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags::3ဘက်ထရီ Holder Micro Usb၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်၊ စိတ်ကြိုက် ၊ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအား၊ အဆင့်မြင့်၊ ဖန်စီ
Battery Holder အစိတ်အပိုင်းများ